Kanaalka Panama | Wararka Safarka
Maria | | America, Maxaa la arkaa
Dhibaatada weyn ee dhismaheeda, kanaalka Panama waa shaqo injineernimada fircooniga ah oo isku xirta badda Caribbean iyo Badweynta Baasifigga. Dhismihiisu sanadkii 1881 wuxuu shardi ka dhigay horumarka dalka ilaa waqtigaas iyo isagoo noqday xarun isgaarsiineed oo muhiimad weyn u leh ganacsiga adduunka marka la eego istaraatijiyadeeda.
Aadida Panama oo aadan booqanin kanaalka waxay la mid tahay inaad aadid Faransiiska oo aadan arkin Taallada Eiffel. Waxaa jira laba siyaabood oo loo booqdo: kanaalka laftiisa, marinka ama aragtidiisa. Faahfaahinta oo dhan waan kuu sheegayaa.
1 Laga soo bilaabo aragtida qufulka
1.1 Qufulka Miraflores
1.2 Pedro Miguel Qufulka
1.3 Qufulka Biyaha oo Nadiif ah
2 Dul mari Kanaalka Panama
Laga soo bilaabo aragtida qufulka
Dariiqa ugu muhiimsan ee lagu arko Kanaalka Panama wuxuu ka yimaadaa aragtida qafilkiisa. Waxaa jira seddex: Miraflores, Agua Clara iyo Pedro Miguel.
Booqashada ugu badan ee lagula taliyo iyo tan caadiga ah waa Xarunta Booqashada ee Miraflores maadaama ay tahay tan ugu fudud ee marin laga helo isla markaana ugu dhow Panama City. Xaruntu waxay leedahay dhowr soojiidasho laakiin qof kastaa wuxuu rabaa inuu u kaco mid ka mid ah saddexda heer ee aragtida meesha aad ka arki karto Kanaalka Panama iyo maraakiibta waaweyn ee maraya nidaamka qufulka.
Markaad aragto albaabada oo furan iyo kuwa xidhan oo biyuhu ka baxayaan waa wax cajiib ah. Si kastaba ha noqotee, maahan waxa kaliya ee lagu sameeyo Xarunta Booqashada ee Miraflores tan iyo markii ay sidoo kale jirto bandhig muujinaya taariikhda iyo waxqabadka kanaalka Panama, doorka ay ku leedahay ganacsiga caalamiga ah iyo noolaha kaladuwan ee aagga. Intaas waxaa sii dheer, waxaa jira qol lagu soo bandhigo filim (Isbaanish iyo Ingiriis ah) oo ku saabsan taariikhda kanaalka.
Guud ahaan, booqashadu waxay socon kartaa ilaa 2 saacadood, laakiin waad daawan kartaa doomaha socda illaa Xarunta Booqdeyaasha ay xirmeyso ama joogayso inaad wax ka cunto mid ka mid ah labada maqaayadood ama baarka.
Markaad booqaneyso Xarunta Booqashada ee Miraflores waa inaad maanka ku haysaa in subaxnimadii maraakiibtu ay ka soo gudbaan Baasifigga una gudbaan Atlantic iyo galabtii si kale. Tan macnaheedu waxa weeye duhurkii maraakiibta ma dhaafayaan mana jiraan wax dhaqdhaqaaq ah oo qufulada ah, sidaa darteed waxaad waqti ku qaadan kartaa inaad ku daawato filimka dukumiintiga ama ku dalxiiso hoolalka carwada.
Pedro Miguel Qufulka
Qiyaastii 5 kiilomitir waqooyi-galbeed ee qufulada Miraflores waa qufullada Pedro Miguel. Maaddaama aysan haysan wax kaabayaal ah soo-booqdaha si uu u arko doomaha ka soo gudbaya irdaha ma jiraan wax kharash ah. Waxaa laga arki karaa gadaashiisa xayndaabka heerka badda maaddaama ay jiraan kuraasyo iyo waddooyin iibiya, dad badan ayaa fursadda u haysta inay fadhiistaan ​​oo ay nastaan ​​inta ay daawanayaan maraakiibta waaweyn ee maraya.
Qufulka Biyaha oo Nadiif ah
Ka fog Panama City waa qufulada iyo Xarunta Booqashada ee Agua Clara, gaar ahaan waqooyiga Gatun Lake oo u dhow magaalada Panama ee Colón, oo saacad u jirta Panama City.
Sanadkii 2017, qufulka Agua Clara ayaa la furay waxayna qayb ka yihiin ballaarinta kanaalka, ujeeddadiisuna tahay in loo oggolaado xitaa maraakiibta ka waaweyn kuwa maraya kanaalka asalka ah inay dhex maraan. Dhamaan kanaalka balaariyay, waa qufulada kaliya ee la booqan karo. Qufulka Agua Clara ayaa ah meesha ugu fiican ee lagu arko Kanaalka Panama haddii aad ku timid waddanka safar aad ugu safreyso dekedda Colón ama haddii aad xiiseyneyso inaad ku soo wareegto aaggaas Panama.
Dul mari Kanaalka Panama
Marka laga gudbo aragtiyaha waxaa jira qaab kale oo lagu baran karo kanaalka Panama: ku dhex raaci doonyo loo diyaariyay dalxiiska. Waa waayo-aragnimo la yaab leh, sida inaad ka ogaato shaqadan cajiibka ah ee injineernimada gudaha. Waxaa jira shirkado kala duwan oo hawsha fuliya qaarkoodna xitaa quraac iyo qado ayey ku siiyaan doonta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » America » Panama Canal